လက်ရှိ Marmaray ပျံသန်းမှုအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၂၀ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်လက်ရှိ Marmaray ထွက်ခွာချိန်နှင့်အခကြေးငွေ 2020
02 / 01 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, TCDD
Marmaray မြေပုံနှင့် Halkalı Gebze Marmaray ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အချိန်ဇယား - Marmaray, ဥရောပနှင့် Anatolian ဘေးထွက်ကိုဆက်သွယ်သည့်စီမံကိန်း Halkalı နှင့် Metro နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုရပ်နှင့်အချိန် Gebze များ၏ content တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ Halkalı Gebze Suburban လိုင်း 2019 တွင် Marmaray စီမံကိန်း၏သက်တမ်းအတွင်းအသစ်လိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ Halkalı ဒီသတင်းထဲမှာ Gebze Metro Line Stations အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေပေးပါတယ် Halkalı သငျသညျ Marmaray Expedition နာရီနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥရောပခြမ်းတွင်တည်ရှိသည် Halkalıက start ကနေ Gebze ရရှိသောရန်။ ဥရောပဘက်ခြမ်းတွင် Halkalı နှင့်Kazlıçeşme Marmaray, Anatolian ဘက်မှAyrılıkစမ်းရေတွင်းနှင့် Gebze အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်။ ဤစီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်ကို Anatolian Side နှင့် European Side ကိုဆက်သွယ်ပေးသောKazlıçeşme Separation Fountain လိုင်းဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့သားများကောင်းစွာသိကြသည်။
လက်ရှိ Marmaray အချိန်နှင့်အခကြေးငွေများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ MARMARAY GEBZE - HALKALI နှင့်SÖGÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNUအကြားပြေးဆွဲမည့်ရထားများမှာ -
Gebze Halkalı တစ်ဦးချင်းစီ 15 ကနေအချိန်ကမိနစ်
တစ်ကြိမ်မှာတစ်ဦးချင်းစီ 8 မိနစ်ကနေ Sogutlucesme Zeytinburnu
Marmaray အခကြေးငွေများ (လက်ရှိ 10.02.2020)
တစ်ဦးက istanbulkart ပြန်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုထက် ပို. လူတစ်ဦးအတွက်အသုံးပြုမှသာလြှငျဖျော်ဖြေနေသည်,
မြေပုံနှင့် Marmaray Gebze Halkalı Marmaray စခန်းများနှင့်ပျံသန်းမှုနာရီ: ဥရောပနှင့် Anatolian ဘေးထွက်ဆက်သွယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Marmaray စီမံကိန်းကို Halkalı နှင့် Metro နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်အားလုံးကိုရပ်နှင့်အချိန် Gebze များ၏ content တှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ Halkalı Gebze ဆင်ခြေဖုံးလိုင်း 2019 တွင် Marmaray စီမံကိန်း၏သက်တမ်းအတွင်းအသစ်လိုင်းများပါဝင်သည်။ ဥရောပခြမ်းတွင်တည်ရှိသည် Halkalıက start ကနေ Gebze ရရှိသောရန်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မျှဝေနိုင်ပါသည်သင်သည်သင်၏ site ကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကူသော html code ကို အသုံးပြု. ဤမြေပုံကိုထည့်နိုင်သည်။
ဥရောပဘက်ခြမ်းတွင် Halkalı အဆိုပါ Marmaray အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်Kazlıçeşmeနှင့် Separation ရေပန်းနှင့်အတူ Anatolian ဘက်မှာ Gebze အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်။
Istanbullites ဤစီမံကိန်းများ၏ Anatolian ခြမ်းမှာရှိတဲ့Kazlıçeşmeပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်သောအလွန်ကောင်းစွာဥရောပဘက်ခြမ်းသိတယ် - Part လိုင်းစမ်းရေတွင်းနှင့်အတူထားကြ၏ဖြစ်ပါတယ်။
Halkalı - အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ Gebze မြေအောက်ရထားမှတ်တိုင် 42 တွင်တည်ရှိသည်။ Halkalı 115 မိနစ်ဆင်းရပ်တန့်ဖို့ Gebze အကြားစုစုပေါင်းကာလနှင့်အတူ။ အကျဉ်းဖြစ် Halkalıခရီးသည် 115 မိနစ်ကနေလမ်းကြောင်း 1 55 နာရီမိနစ် Gebze ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
Halkalı Gebze မီထရိုလိုင်းကနေတစ်ဆင့်အများအပြားလွှဲပြောင်းဘူတာတွင်တည်ရှိသည်။ Halkalı Gebze metro line မှတဆင့်သင်လွှဲပြောင်းပေးမည့် metro လိုင်းများ (မှတ်တိုင်များ) ကိုအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
Transacia Express Ankara တီဟီရန်ရထားအစီအစဉ်နှင့်လက်မှတ်ကြေး
အရှေ့ Express ကိုအချိန်ဇယား 2020
Havaist ခရီးစဉ် Times Havaist မှတ်တိုင်များနှင့် Havaist စျေးနှုန်းဇယား 2020
အဇာဘိုင်ဂျန်ရှိ Mersin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး